सिक्का निकाल्दा राष्ट्र बैंकलाई १५० प्रतिशतसम्म घाटा
नुवाकोट त्रिशूली महोत्सव
फरकधार / असोज १७, २०७५
काठमाडौं– एक र दुई रुपैयाँको सिक्का जारी गर्दा १५० प्रतिशतसम्म घाटा भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सिक्का निकाल्न छाडेको छ । तर, यसको आधिकारिक घोषणा भइसकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार एक रुपैयाँको सिक्का निकाल्दा यसको लागत नै एक रुपैयाँ ५० पैसाभन्दा धेरै हुन आउँछ । त्यस्तै, दुई रुपैयाँको सिक्काका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक रुपैयाँ ९८ पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ । बजारमा सिक्काको प्रयोग खासै नहुने र लागत नै बढी हुने भएपछि नौ वर्षयता सिक्का प्रकाशन गरिएको छैन ।
नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घट्दै गएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले एक र दुई रुपैयाँको नोट छाप्नुको साटो सिक्का प्रकाशन गर्न सुरु गरेको थियो । तर, त्यही सिक्काबाट पनि राष्ट्र बैंकलाई घाटा भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले ९ वर्ष अगाडि पहिलो पटक अहिले प्रचलनमा रहेको एक रुपैयाँको सिक्का छाप्नकै लागि एक रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, दुई रुपैयाँको सिक्का छाप्न राष्ट्र बैंकले एक रुपैयाँ ९८ पैसा लगानी गथ्र्यो । तुलानात्मक रुपमा एक र दुई रुपैयाँका नोटभन्दा सिक्का टिकाउ हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले सिक्का प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो ।
किन महङ्गो पर्छ नेपाली सिक्का ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सिक्का स्टिलका सिक्का हुन् । स्टिलबाट बने पनि माथिबाट ब्रोन्जको जलप लगाउने भएकाले सिक्का स्टिलका जस्ता देख्न सकिँदैन ।
त्यसैले सिक्का प्रकाशनका स्टिलको मूल्यसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । एक दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिलको मूल्य निकै बढेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अहिले सिक्का छाप्नु पर्दा झन् धेरै महङ्गो हुने अनुमान गरेको छ । यही कारणले पनि नौ वर्षयता नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सिक्का निकालेको छैन ।
अर्कोतिर अहिले नेपालमा सिक्काको माग पनि खासै छैन । सिक्काको सर्कुलेसन कम हुने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले सिक्का प्रकाशनलाई खासै महत्व दिएको छैन ।
किन कम प्रयोग भएको छ सिक्का ?
सिक्काको प्रयोग कम हुनु चाहिँ हामी सचेत नभएकाले हो । जस्तो कि कुनै पसलमा हामीले कुनै सामान किन्यौँ भने एक–दुई रुपैयाँ फिर्ता लिँदैनौँ । अहिले सार्वजनिक गाडीमा हिँडडूल गर्दा पनि हामीले एक रुपैयाँ वा दुई रुपैयाँ फिर्ता लिन खासै महत्वको कुरा ठान्दैनौँ ।
एक व्यक्तिका लागि यो सानो कुरा हुनसक्छ, तर हजारौंले यसरी सिक्का प्रयोग नगरिदिँदा र सिक्काको प्रयोग गलत ठाउँमा हुँदा अर्बौ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
मानिसहरु सिक्का नबोक्ने, विभिन्न धार्मिक प्रयोजनको लागि नदीमा फाल्ने भएकाले पनि नेपाली सिक्का अल्पायुमा नै नष्ट भइरहेका छन् । र, यसले देशको अर्बौ रकम नोक्सान गरिरहेको छ ।
नयाँ पाइलट प्रोजेक्टको तयारीमा राष्ट्र बैंक
नेपाली सिक्काको प्रयोगमा असामनता अत्यन्त बढ्दै गएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पाइलट प्रोजेक्ट नाम दिएर एउटा प्रोजेक्टको तयारी गरिरहेको छ । यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय कार्यालय तथा अन्य विभिन्न ६ कार्यालयमा भेन्डिङ मेसिन राख्दै छ ।
त्यो भेन्डिङ मेसिनमा आवश्यक परेमा सिक्का झिक्न मिल्ने वा सिक्का राखेर नोट झिक्न मिल्नेछ ।
घाइते लडाकुको चीत्कार: ‘उपचारका लागि बैशाखी बेच्न तयार छौँ किन्ने हो ?’
सागर चन्द | पुस १, २०७५
‘हस मनी’ दिएकोमा ट्रम्प पछुताएको उनकै पूर्व-वकिलको दाबी
एजेन्सी | मंसिर २८, २०७५
नेपाली रंगमञ्च : रोजीरोटी जुटाउनै धाै–धाै
| मंसिर २९, २०७५
बालबालिकालाई नाटक गराउँदा ‘एक्सप्रेसन’मा बढी ध्यान दिनुपर्छ
जब करिना कपुर खान र मीरा राजपुतको आमने–सामने भए
टुँडिखेल आसपासमा आइतबारदेखि ‘पिक एन्ड ड्रप’
मोबाइलमा २०७ वटासम्म एप्स राख्छन् भारतीय
मैले अवश्य न्याय पाउनेछु –तनुश्री दत्ता
के दूधमा अब कोलीफर्म छैन? हिजो अखाद्य दूध आज के भए? कसले दिने सूचना?
‘शक्ति : द पावर’को बिदाइ